तीन लाख २६ हजार घुससहित वन अधिकृत रंगे हात पक्राउ ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
शनिबार, २८ मङि्सर २०७६
तीन लाख २६ हजार घुससहित वन अधिकृत रंगे हात पक्राउ !
प्रकाशित : सोमबार, साउन २७, २०७६११:२९ पब्लिक आवाज /संवाददाता
डोटी, २७ साउन/रु तीन लाख २६ हजार नगदसहित डोटीको बिपीनगरमा कार्यरत एकजना सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डिसीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।
काम गरिदिएबापत वन उपभोक्ता समितिका व्यक्तिबाट घुस रकम लिएको उजुरीका आधारमा निज सहायक वन अधिकृत डिसीलाई आयोग कञ्चनपुरको टोलीले आइतबार साँझ डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भाँतकाँडाबाट पक्राउ गरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो पैसा मेरो हो, सहायक वन अधिकृत डिसी जीलाई फसाउन कसैले आरोप लगाएको हो, म जहाँ गएर पनि भन्न सक्छु रकम मेरो हो ।” यद्धपि मल्लले कुन काम विशेष र के का लागि त्यो रकम बोकेका हुन त्यो भने खुलाएका छैनन् ।
मल्ल निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले सहायक वन अधिकृत डिसी घुससहित पक्राउ परेको पुष्टि गर्नुभएको छ ।
उता डिभिजन वन कार्यालय डोटीका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीले सहायक वन अधिकृत डिसी यही साउन २२ गते कञ्चनपुरका लागि रमाना लिएर गएकाले यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
अवैध लागु औषध गाँजा सहित मानिस पक्राउ ”
हत्या गरी शव बेपत्ता पारेको आरोपमा नेकपा मोरङका नेता योगेन्द्र गुरुङ पक्राउ !
भरतपुरको वडा कार्यालयमा बम बिस्फोट, विप्लव नेतृत्वको संलग्नता रहेको आशंका !
टेलिकमको तार चोरी गर्ने तीन पक्राउ
टिपरबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पाँच प्रहरी रंगेहात पक्राउ !